Njem site Europe na a ụgbọ okporo ígwè bụ ihe banyere deceleration karịa ọsọ. As you pass mara mma sceneries na ụzọ gị na njedebe ikpeazụ, you feel serene and wonderful. N'ihi ya, going on cross border trains becomes a time to relax, nwere ụfọdụ oge na gị onwe gị na ọbụna na-atụgharị uche.
Ijikọ London na Amsterdam, Avignon, Brussels, obere, Lyon, Marseille, Paris na Rotterdam, Eurostar bụ eleghị anya ndị kasị ewu ewu elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè ọrụ na Europe. Ọzọkwa, Getlink iche iche na-arụ ọrụ na nwere ndị ụgbọ oloko. Ha na-agazu Channel Ọwara n'etiti United Alaeze na France. Na-agba ọsọ na a netwọk nke oke ọsọ edoghi, Eurostar azụ ọnụ iri na asatọ-ụgbọ ala Class 373/1 ụgbọ oloko na iri na isi na-ụgbọ ala Class 374 ụgbọ oloko. Ha na-agba ọsọ na ruo 186 mph (300 Kilomita kwa hour). Ọzọkwa, Eurostar eburu ọzọ njem karịa niile ụgbọ elu jikọtara. Nke a na-eme ka Eurostar ọchịchị kasị okporo ígwè ọrụ na ụzọ gasị na ọ na-arụ ọrụ.
The mba TGV nọ n'ebe ọwụwa anyanwụ ga-ewe gị Frankfurt na Munich. N'otu aka ahụ, gị ndịda njem ga-ewe gị ozugbo na Milan na Italy ma ọ bụ Barcelona na Spain. Emehiela njem, TGV bụ otu n'ime ọdụ ụgbọ okporo ígwè kachasị mma! Ọzọkwa, ọ ga-ewe gị kasị ebube ihunanya njem site Paris na n'igbere mmiri na Mediterranean. ma ọ bụ, na ọmarịcha Bordeaux, Lyon na Marseille na ụwa na-ama Cannes. Ya mere, ma ọ bụrụ na ị chọrọ iru France na / ma ọ bụ Switzerland ụgbọ okporo ígwè, i nwere ike ime nke ahụ site na-agba na cross ókè-ala ụgbọ oloko ejikwara site TGV Lyria.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/cross-border-trains-europe/ - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)